လုံခြုံရေး ကြုံဆုံတွေး Security | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Myanma News » လုံခြုံရေး ကြုံဆုံတွေး Security	4
လုံခြုံရေး ကြုံဆုံတွေး Security
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 31, 2016 in Myanma News, Opinions & Discussion |4comments
ရခိုင်ပြည် ဘူးသီးတောင် နဲ့ မောင်တောမှာ နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးမည်၊ အသက်၃၅နှစ်အောက် လူငယ်တွေ စုဆောင်းလေ့ကျင့်မည်ဟု သတင်းများ ဖတ်ရသည်၊ တောင်းဆိုသော ပြည်သူ့စစ် မပေးပါ၊ ပေးလည်း သူပုန်ဖြစ်ဖို့ သေချာနေတော့ ဒီလောက်ပဲ ပေးတာပဲ ဟုတ်လှပြီ။ ပစ်အားသိပ် မပြင်းထန်တဲ့ လက်နယ်ငယ်၊ ကင်းထောက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာများ တပ်ဆင်ပေးမည်ဟု ယူဆပါသည်။ တဆက်ထဲမှာ ဖတ်ရတာ ကျောင်းဆရာများကို အမျိုးသားများပဲ ခန့်ပြီး အခြေခံ စစ်သင်တန်းပေးပါမည်တဲ့။ အခြေအနေရ လိုအပ်သည့် အကြောင်းပြချက်ရှိသည်၊ အိမ်နီးခြင်းထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း အစ်စလာမ်မစ် အကြမ်းဖက်သမားများပစ်မှတ်တွင် ကျောင်းဆရာများ ထိတ်ဆုံးမှပါခြင်းက နောက်ထပ် အကြောင်းပြချက် ဖြစ်နိုင်သည်။ စဉ်းစားရမည်က အရပ်ဖက် ပညာရေး နှင့် စစ်ရေးစစ်ရာ သင့်တော်ပါ၏လော။ နိုင်ငံတကာ ယဉ်ကျေးမှုတွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးသည် ပဋိပက်ခများမှ ဝေးရာ ကင်းလွတ်ဇုံဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖက် စစ်ပွဲများမှ အတတ်နိုင်ဆုံးသီးခြားတည်ရှိသည်။ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးရုံနှင့် သာသနိက အဆောက်အုံများတွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ နေရာယူ စခန်းချမှုကြောင့် အနီးနာဝန်းကျင်ရှိ အရပ်သားများ ထိခိုက်သေဆုံးမှုမှာ ရာဇဝတ်မှု မြောက်သည်။ ဗိုလ်သန်းရွှေလက်ထက် ဘုန်းမီးနေလတောက်ပစဉ် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့နှင့် မီးသတ်ကို တပ်မဒေါ်နေ့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားတွင် စစ်ကြောင်းချီတက်စေရွေ့ နိုင်ငံတကာတွင် အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်ဖူးသည်။ နောက်တချက်က အကြမ်းဖက်သမားများ၏ တရားဝင် ပစ်မှတ် ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ကျောင်းဆရာဟု မြင်ရန် ခဲယဉ်းသွားစေမည်။ သူတို့ ပစ်တတ်ခတ်တတ် လာသဖြင့် ဒေသလုံခြုံရေး မည်မျှ ထူးခြားလာမည် တာဝန်ရှိ ပုဂ်ဂိုလ်များ သုံးသပ်ရန်သင့်သည်။ နို့မို့ပါက အရပ်သားအဖြစ် မြင်စေခြင်းကသာ အလုံခြုံဆုံး ဖြစ်ပါမည်။
ပိုစိုးရိမ်မိသည်က ရခိုင်ပြည်နယ် အနာဂါတ်ရေး… အခြား ပြည်နယ်များက စစ်ဖက်အုပ်ချုပ်မှု စနစ်မှ အရပ်ဖက် အုပ်ချုပ်ရေး ယဉ်ကျေးမှု ဆီသို့ ပြောင်းလဲ ကြိုးစားကြချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်တွင်မတော့ လက်နက်ကိုင် ယဉ်ကျေးမှုသို့ နောက်ပြန်ဆွဲနေသလား တွေးမိသည်။ လက်နက်ဖြင့် ဖြေရှင်းရသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပညာတတ်၊ လူကောင်းလူမွန်များ မကျက်စားနိုင်။ ကာယကံရှင် လက်နက်ကိုင်များ အနေနှင့်လည်း ကြာလာလျင် ခေါင်းသုံးဖြေရှင်းနည်း မသုံးတတ်ပတော့။
လုံခြုံရေးနှင့် အသိပညာ ဟန်ချက်ညီညီ သွားပါမှ လိုအပ်သည် တည်ငြိမ်မှု တိုးတက်မှု ရပါမည်၊ ဒေသတွင်း စီးပွားရေးတိုးတက် ထွက်ကုန်များများ ကြံဆောင်နိုင်မှ နေရပ်စွန့်ခွာမှုများ တားမြစ်နိုင်မည်၊ နယ်မြေဆုံးရှုံးမှု ရပ်တန့်နိုင်မည်။ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးသည် သူနှင့် ထိုက်တန်သော စနစ်၊ အစိုးရကိုသာ ရစကောင်းသည်မို့ အနာဂါတ်ကို မည်သို့ ပုံဖေါ်မည်ကို ကာယကံရှင် ရခိုင်ပြည်သူများ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မည်။
အောင်ကြူးhas written 585 post in this Website..
View all posts by ဦးကြောင်ကြီး →	Blog
kai says: ကြည့်ရတာ.. ဒေါ်စုက.. ချိုင်းနားကို ..ပိုက်လိုင်းအပြင်..ရထားလမ်းဖေါက်ခွင့်ပါပေးမယ်ထင်တယ်..။
ချိုင်းနားရဲ့.. မဟာဗျူဟာက ဆက်လာမှာပါ..။ ဒါဆို.. တိုင်းပြည်စီးပွားရေးလည်း ထောင်တက်သွားမှာမို့.. လုပ်သင့်တာလည်းအမှန်.။
အဲဒီနယ်တွေကို ဖြတ်မှာမို့.. ဒေသတိုးတက်လာမှာလည်း.. တော်တော်သေချာလာသပေါ့..။
ကြားထဲက.. ဘာလုပ်နေမှန်းသေချာမသိတဲ့.. ဒေသခံ..ရခိုင်များနဲ့.. ဘင်္ဂလီများကတော့.. ဘုမသိ..ဘမသိ.. ခံပေါ့..။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ခုထိတော့ စီးပွားရေးက အားတက်စရာ မရှိသေး……..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Thint Aye Yeik says: ”တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးသည် သူနှင့် ထိုက်တန်သော စနစ်၊ အစိုးရကိုသာ ရစကောင်းသည်မို့ အနာဂါတ်ကို မည်သို့ ပုံဖေါ်မည်ကို ကာယကံရှင် ရခိုင်ပြည်သူများ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မည်။”
ခရက်ဒစ် – ငါကွ
ဦးဦးပါလေရာ says: အခုအထိ ရခိုင်မှာ လုပ်နေသလောက်တော့ တော်တော်ပျော့သေးတာပဲ
ဒါမှမဟုတ် ဘာလုပ်နေမှန်း သတင်းတက်မလာတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်..
ဒီကုလားဆိုးတွေက ပျောက်ကျားနည်းဗျူဟာကို ကျင့်သုံးတယ်
ပျောက်ကျားနည်းဗျူဟာ ဆိုတာ စစ်စည်းကမ်း လူ့စည်းကမ်း ဘာမှလုံးဝမရှိ
ဒါ့ကြောင့် ရန်သူကို တန်ပြန်ပျောက်ကျားနည်းဗျူဟာနဲ့ တုန့်ပြန်တဲ့အခါ
(ဆရာကြီးများကို အားတော့နာပါတယ်.. ဟဲ..ဟဲ..)
စစ်စည်းကမ်း လူ့စည်းကမ်းကို လုံးဝလုံးဝ ထည့်မတွက်နိုင်မှ
တကယ်တော့ ကုလားဖြစ်ဖြစ် ကချင်ဖြစ်ဖြစ် အခြားဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်
ပျောက်ကျားနည်းဗျူဟာကို သုံးရင် –
အဲဒါ ကိုယ့်လူထုကို ကိုယ်တိုင် ချနင်းစတေးတာပဲဖြစ်တယ်..
ကိုယ့်လူထုကိုယ့်ဘက်သားနာရင် အဲဒါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တရားခံအစစ်ဖြစ်ပါတယ်..
Comments By Postအရှေ့တောင်အာရှမှာ သွားလည်သင့်တဲ့ ဂူ(၆)ခု - aye.kk - သျှားသက်မာန်ဆိုလာစွမ်းအင်ကိုအပြည့်အ၀အသုံးချပြီး ရပ်တည်နေတဲ့ Ta’u ကျွန်း - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikဗီယက်နမ်လား….အနောက်နိုင်ငံလား…???? - “ဘီလူးကြီး”ogre - သျှားသက်မာန်Holland ဒေသ Giethoorn မြို့ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeik3D လက်ရာများကိုခံစားနားဆင်ဖို့- သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ - Thint Aye Yeik - aye.kkVenice မြို့ပေါ်က အလှဆုံး နေရာ (၆) ခု - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikဗဟုသုတဟင်းလင်းအိုးကြီး - သျှားသက်မာန် - kaiKrabi ကို သွားလည်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း ၁၀ ခု - သျှားသက်မာန် - သျှားသက်မာန်"မပြန်လမ်း"တဲ့လား - ပြန်ချင်စိတ်က အဓိကပါကွယ်... - Thint Aye Yeik - ဇီဇီ" ငါ့ ကြောင့် ငါ အခါခါသေရ၏ " - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - kai"စိတ်ငှင်ခြင်း " - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - aye.kkတရားရလိုပါလျှင် - aye.kk - ဂျစ်စူNorway နိုင်ငံ၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကောင်းဆုံး လည်ပတ်စရာများ - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - Thint Aye Yeik၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ လည်ပတ်သင့်တဲ့ အာရှက အလှဆုံး ကျွန်း ၁၅ ခု - Thint Aye Yeik" လမ်းပေါ်မှာ " - Thint Aye Yeik - aye.kkဓါးတွေကို ထိုင်မျှားမိတဲ့သူ - Thint Aye Yeik - ဇီဇီ" ခွဲ " - ကိုပေါက်(မန္တလေး) - ဂျစ်စူဂွဇွတ်တောင်ပေါ်မှ မျှစ်ကြော်ပြုံး၏ စိန်ခေါ်သံ - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - သျှားသက်မာန်အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ တတ်ကျွမ်းလိုသော် ( ၈) - ပါမောက္ခမျိုးကျော်မြင့် - ဂျစ်စူ - ဇီဇီသေးတာက တခါတလေ ကြီးတာထက် အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်တဲ့ အိမ်သေးသေးလေးတွေ - အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် - သျှားသက်မာန်" အပူနဲ့လူ" - aye.kkAngkor Wat ၊ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတ ဘုရားကျောင်းများ အကြောင်း တစေ့တစ်စောင်း - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikဇော်ဂျီယူနီမှသည် ညဈေးဆီသို့ - ဇီဇီ - manawphyulayမှော်ကမ္ဘာထဲကို ခေါ်သွားဦးမယ် ဂျေကေရဲ့ Fantastic Beasts - ဇီဇီ - Thint Aye Yeikရှေ့တန်းမှ အမှတ်တရများ - ဇီဇီ - Thint Aye Yeik" မော တဲ့ နေ့" - aye.kk - Thint Aye YeikJapan နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Zero-Emissions Bar - Thint Aye Yeik - kai"ဖြေ " - Thint Aye Yeik - aye.kkဗီယက်နမ် နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဟနွိုင်းမြို့မှတောင်ပိုင်း ဟိုချီမင်းမြို့ သို့ ခရီး - သျှားသက်မာန် - သျှားသက်မာန်အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ - ကထူးဆန်း - Thint Aye Yeikကျုံထော်ရေတံခွန်ပြန်ဖွင့်ပြီ - သျှားသက်မာန် - Thint Aye YeikCategory	Arts & Humanities
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10Anzartone (95532 Kyats )alinsett (93425 Kyats )kyeemite (91373 Kyats )weiwei (83114 Kyats )SP (80866 Kyats )padonmar (76894 Kyats )blackchaw (76343 Kyats )Foreign Resident (59014 Kyats )monmon (58579 Kyats )Northern Onestar (56676 Kyats )FB	FB